Intsha mayisebenzise ithutshana eliqhamukayo, ingalindi - Bayede News
Home » Intsha mayisebenzise ithutshana eliqhamukayo, ingalindi
Intsha mayisebenzise ithutshana eliqhamukayo, ingalindi
Inhloso yesitokofela makube ngephusile
Uma kunento engiyifundile empilweni nengifisa ukuthi uyifunde nawe, ukuthi amathuba afikela noma ngabe ubani kodwa okubalulekile ukuthi uma efika empilweni yakho ungadlali ngawo.
Ukwedlula kukamama u-Olpha “GeeSixFive” Selepe, odlule emhlabeni ngemuva kukukhipha ingoma yakhe ethi “Obani Laba Bantu”, kungifundise lukhulu. Ngibone ukubaluleka kokusebenzisa ithuba olitholile kunokuthi ulokhu ukhala futhi ufuna izinto ezinkulu. Ngifundile ukuthi isikhathi neminyaka yomuntu ayibalulekile kangakanani kodwa into ebalulekile ukubambisisa ithuba onikwe lona.
Lapha emhlabeni, usebenzisa lokhu onako okuncane ukuze wenze noma uthole okukhulu. Ukulinda ithuba elikhulu noma imali eningi ukuze ufeze iphupho lakho kuzokubambezela. Uma ngikhuluma nentsha ethanda ukuba izikhulumi ezikhokhelwayo ngiye ngithi ayiqale lapho ikhona, ikhulume nabantu esuke inabo ngaleso sikhathi ngaphambi kokuthi iqashwe iyokhuluma ezindaweni eziphezulu.
Abantu bakithi abaningi babanjwe yinto encane empilweni futhi uma bengakwazi ukubona lezi zinto ezilandelayo bangaphumelela.
Abantu bakithi bahlulwa ukubona ithuba. Sikhala ngamathuba noma esefikile empilweni yethu ngoba sazijwayeza ukukhangeza ngaso sonke isikhathi. Sibona ithuba seledlulile ngenxa yokunganaki. Into engiyifundile ngenkathi umhlaba wonke uvinjezelwe ukhuvethe ukuthi uma ubudlala ngamathuba empilweni uzozisola futhi ngifundile ukuthi amathuba ahlezi ekhona noma ngabe isimo sibukeka sibucayi kangakanani.
Abantu abahlakaniphile abakhalanga ngokhuvethe kwaze kwashona ilanga kodwa basukumile bafuna amathuba lapho engakhona. Namuhla siyabethuka sithi banenyoka ngoba benemali eningi kanti yithi esihleli phezu kwamathuba esinikwe wona.
Abantu abaningi, ikakhulu abasha, badlala ngamathuba. Ngike ngathola ithuba lokuxoxa nabantu abasha abakhala ngokungaphumeleli empilweni. Iningi labo banento eyodwa efanayo ngabo, ukuthi banikwa ithuba badlala ngalo. Abanye banikwa ithuba lokufunda, bafike bakhulelwa noma bakhulelisa esikoleni. Abanye banikwe ithuba lomsebenzi bathi uma sebesebenza bakhohlwa ukuthi baningi abantu abafuna umsebenzi, badlala emsebenzini baze baxoshwa. Ubaba wangifundisa ukuthi ithuba liyabanjisiswa uma ulitholile ngoba awazi ukuthi kusasa kuzobe kunjani. Ukhuvethe esibhekene nalo kulo nyaka lusikhombise kahle ukuthi amathuba akuyona into yokudlala ngayo.
Umi ngomumo uMnyango ukwamukela abanye abafundi
Enye yezinto ezenza sedlulwe amathuba empilweni, ukunganeliseki. Uma singake sifunde ukwaneliseka singabona ukuthi sinokuningi kunalokhu esikufunayo. Ukunganeliseki kwenza ulahlekelwe yilokhu onakho ngokungekho. Abantu abanganeliseki bahlezi bebalisa, okwenza ukuthi bangaboni noma amathuba ephambi kwabo. Umuntu okhalayo akavamisile ukubona kahle emehlweni, kudingeka ukuthi athule futhi asule izinyembezi ngaphambi kokuthi ababone kahle emehlweni. Kanjalo-ke nasempilweni, kubalulekile ukuthi ungakhali njalo ngoba ngeke ubone noma usubusisiwe ngamathuba.
Sesiyophetha unyaka, ngifisa ubheke emuva unyaka uqala uzibuze ngamathuba onikwe wona kanye namathuba ongabe uzakhele wona. Ngifisa ukuthi uma uqala unyaka ozayo uqale lapho ukhona futhi uqale ngalokhu onakho. Izinto ezinkulu zidalwa izinto ezincane. Impumelelo iqala kancane, iye ngokuya ikhule. Abantu abanemali nabaphumelele empilweni abaqalanga lapho ubabona khona, baqala kancane.
Baqala ngokubona amathuba kanye nokusebenzisa amathuba amancane abanikwe wona. Baqale bathembeka kulokho abanakho, bathembeka kulokho abanikwe kona, okuyikho okwadala izinto ezinkulu empilweni yabo. Ungabe usalinda kude, impumelelo yakho ayiqale manje lapho ukhona ngokusebenzisa lokhu okunikwe noma onakho.
nguSanele Gamede Dec 11, 2020